Villa Paradiso | Iqula lokuqubha elinamagumbi amathathu okulala
Ifama sinombuki zindwendwe onguSiddhant
Indlu yaseFama yaBucala, eKufuphi neNdlela ePhambili yaseChhatarpur,
*Iikhilomitha ezili-10 ukusuka kwiSikhululo seMetro 56,
*Imizuzu engama-20 esuka kwiCyber Hub/mandi Farms yaseDelhi.
Ukusasaza Ngaphezulu kweehektare ezi-2 zokutshiza koHlaza | Amagumbi okulala ama-3, Igumbi lokuhlala Iqula lokuqubha, iWiFi, iFama iVilla ilungile kuHlala loSapho, ukubaleka ngoLonwabo, imibhiyozo yaBucala, iindawo zokuhlala zoMtshato, iindawo zokuHlala eziNkampani.
Nceda ufunde iNkcazelo eneenkcukacha Ngezantsi
*I-Acre ezi-2 zeNdlu yeFama yaBucala-Erentwayo njengeYonke / iPropathi eZimeleyo kuphela
* I-Villa enkulu inamagumbi ama-3 anegumbi lokuhlambela kunye negumbi elikhulu lokuzoba
* Indlu yaseFama inesakhono sokulala esipheleleyo seeNdwendwe ezi-6-9
* Ubuncinci bexabiso lokuBhukha iVilla ihleli ifana kwiiNdwendwe ezi-2. Emva kweeNdwendwe ezi-2, Iintlawulo zoMntu owongezelelweyo ziyasebenza. Ukulala Okuphezulu Kuvumelekile Kwiindwendwe ezili-9 Kuphela (kubandakanywa nabantwana).
* Indawo yokuHlala eyokozelayo ikwindawo yokuhlala eMain Villa enendawo esesikweni/ engacwangciswanga yokuya kuthi ga kwiindwendwe ezili-14.
*Igumbi lokutyela elahlukileyo elinetafile yokutyela
* Ikhitshi eliphangaleleyo kunye nezixhobo
* Iqula lokuqubha langaphandle
* Inkundla yeBadminton / iVolley Ball Net
* Inkqubo yoMculo
* IBarbecue (Nceda ufunde iiNtlawulo apha ngezantsi)
* Umlilo weBon (Nceda ufunde iiNtlawulo apha ngezantsi)
Okunye / Iindawo ezikufutshane:
* Indawo yedama ehonjisiweyo kwiPropati
*Iingca ezibunjiweyo ezinendawo yokuhlala yangaphandle / ifanitshala
*Atv Adventure Park Kufuphi
* Qhuba-kwiCinema ekufutshane
* IKhosi yeGalufa kunye neZiko lezeMidlalo eliFutshane kuQeqesho
* IiSuites zoSapho ziFakelwe iTv yaBucala eyi-32" eKhonelwayo enezitishi zeCable
*I-TV enkulu ye-52 "yeLed (eneNetflix / Iinkonzo zokusasaza) ibonelelwe kwigumbi lokuhlala ukuze kujongwe usapho / kuqikelelo.
* Ikhitshi inezona zixhobo zifunekayo kunye nezixhobo ezifana neMicrowave, iOveni yokubhaka, isitovu segesi, ifriji, iMixer Grinder, isicoci samanzi eRo, iToaster, iCutlery kunye neCrockery.
* IPropati ineSifudumezi soMoya (KwiiNyanga zeHlobo) NgokuHlulwa kweZipholisi zoMoya kwaye zifuduselwe (kwiiNyanga zaseBusika) kusetyenziswa iiConvector zoBubushushu / iHalogen / izifudumezi ze-oyile (akukho kufudumala kuMbindi / ukuPholisa umoya).
* Inikezelwe i-20 Mbps Wifi (umgca oqeshiweyo)
• Onke amagumbi okuhlambela anezifudumezi zaManzi eziGcina ukubonelela ngamanzi ashushu
*IPropati ine-100% yokuGcina amandla
* Nceda uqaphele ukuba ngenxa yezizathu zokuLayisha, sivumela iTotali ye-4 A / C (s) ukubaleka kunye ngexesha elinye.
* Ilinen ecocekileyo ecocekileyo iyabonelelwa ngalo lonke ixesha lokungena. Iitawuli zePool ezahlukileyo azibonelelwanga (kuphela iitawuli ezikumagumbi okuhlambela ngokwenani leeNdwendwe ezibonelelweyo). Iitawuli zePool zingacelwa kodwa ziyakuhlawuliswa nge-Rs. I-50 ngetawuli nganye okanye iindwendwe zethu zamkelekile ukuzisa okufanayo.
* Ugcino lwezindlu lubonelelwa yonke imihla phakathi kwe-10:30 am - 1pm
* Abakhathaleli bethu bakhona ukuze bagcine izindlu kwaye abancedisi ekunikezeni ukutya / ukuncedisa ngeziselo. Ukuba iNkonzo iyafuneka sinokuLungiselela aBaphathi beNkonzo ngentlawulo eyongezelelweyo ye-Rs. I-1,000 (kwiiyure ezi-6 zeNkonzo) Ngomphathi ngamnye. Ukwaziswa kwangaphambili kuyafuneka ukuze kulungiselelwe abasebenzi benkonzo.
Umbane oFanelekileyo unikezelwa njengeeYunithi ezili-150 ngosuku. Ukufundwa kwemitha kuyakurekhodwa kwi-Check In kwaye uPhume. Oku Kwanele ukuqhuba iPropati yethu nge-Air-conditioning / ukufudumeza kunye nezinto eziyimfuneko. I-A-Cap ifakiwe Njengoko singafuni ukuba uMbane usetyenziswe gwenxa ngokushiya sonke isixhobo sivuliwe- singajongwanga, njengoko simosha uMbane (osele unqongophele kweli lizwe) kwaye ikwabeka uMngcipheko woKhuseleko ngenxa yokuCwangciswa koMbane / ukufudumeza ngokugqithisileyo. YeziXhobo. Nceda uvule i-Air-conditioning xa ukwindawo ezingaphakathi kwaye uyicime xa uzakuba sephulini iiyure ezimbalwa. Oku kuya kusinceda ukuba sigcine iplanethi kwaye sihlale siluhlaza.
Usetyenziso oloNgezelelweyo loMbane luya kuhlawuliswa ngexabiso leeRs. 7 ngeYunithi nganye ngokweeYunithi ezongezelelweyo ezisetyenzisiweyo.
Ukutya kunye nokutya:
*Iindawo zokutyela ezininzi kwindawo ekufutshane kunye neenkonzo zokuhambisa njengeZomato / Swiggy nazo zihanjiswa kwindawo yethu. Ukukhankanya iindawo zokuThumela eziBalwa-M'creme, uMughal Affair, Asian Haus, Baan Thai, Cafe Tonino, Joint Cafe, Imly Cafe, Shwarama House, Chicago Pizza, Tossin Pizza, Pizza Hut, Indian Grill Room, kunye nezinye ezininzi. Ukuhanjiswa kwaLate Night's (2 am) ziyafumaneka ukusuka eMitraao 2.0, Wrap It Up, Batman Delivers.
Imithetho yedama lokuqubha:
Ukusebenzisa Iqula lokuqubha:
* Ukutsiba echibini nakwesiphi na isiphelo kuthintelwe ngokungqongqo (ngenxa yezizathu zoKhuseleko)
* Amaqela avumelekile kwiNdawo yePoli yokuqubha, nangona kunjalo, ziLahliswa kuphela / iiglasi zePlastiki ezivumelekileyo kwiNdawo yePoli. Iibhotile zebhiya / iglasi yeglasi ithintelwe ngokungqongqo kwiNdawo yephuli (iiToti zebhiya / ezilahlwayo / iglasi yeglasi ivumelekile)
* Abangaqubhiyo kunye nabantwana (abangakhange bajongwe) abavumelekanga ukuba bangene kwindawo yethu yedama
* IiNdwendwe zethu zizodwa kwaye zinoxanduva olucacileyo lokusebenzisa ichibi emngciphekweni wabo
* Nayiphi na intlekele / iNgozi equleni ayisayi kuba naluxanduva, icace okanye ichazwe kumnini-ndlu, amahlakani ayo, abanini bePropati okanye nabaphi na / okanye babasebenzi bePropati.
*Ukungathotyelwa kweMithetho yeNdawo yokuqubha akusayi kunyanyezelwa kwaye kuya kukhokelela ekurhoxisweni kwangoku kokubhukisha ngaphandle kwembuyekezo. Naluphi na undwendwe olufunyenwe lutsiba echibini / oluphethe iibhotile zebhiya / iiglasi ukuya kwindawo yedama luza Kuhlawuliswa ii-Rs. 25,000 Ngokungathotyelwa (le yeyoKhuseleko lweeNdwendwe).
* Iindwendwe ziyakucelwa ukuba zityikitye isilawulo sobutyala phambi kokungena kwiQubha lokuqubha
Ifama ikhuselwe ngokupheleleyo ngumda kwaye iiGango zokungena zivulwa kuphela ngabasebenzi bethu besenzela iindwendwe zethu. Amasango ethu Okungena Avalwa ngentsimbi ye-11pm Ngezizathu zoKhuseleko. Ukuba ukuFikelelwa kwaLate ebusuku kuyafuneka, kwaKufanayo kuhlawuliswa eyongezelelweyo ngeRs. 1000 ngosuku.
Ukusingatha imisitho / iiNdibano
* IFama Yethu iVilla inokubhukishelwa imibhiyozo yaBucala, amatheko oMhla wokuzalwa, iMicimbi yoSapho, iMisitho yaPhambi/yasemva komtshato (iBarat ayivumelekanga), imisitho yoShishino, amaQela ePool, njl. njl.
* Amaqela avunyelwe kwiindawo ezivulekileyo kuphela kunye neNdawo yePool
* Amaqela avunyelwe kwiindawo ezivulekileyo kuphela kunye neNdawo yephuli.
* Kumatheko aBucala / iiNdawo zoLuntu (ezingezizo ezomtshato) kunye neeNdwendwe eziphezulu ezifikelela kwi-50 yeeNdwendwe eziNdwendwelayo ze-Inr 750 ngondwendwe ngalunye ngosuku luhlawuliswa ukongezwa kwiPropati yokubhukisha yeeNdwendwe eziHlala. Le ntlawulo ibhekiselele kwiRenti yePropati.
* NgeeNdibano ezinkulu (ukuya kwiiNdwendwe ezingama-75) kunye noMtshato / iiNdawo zaPhambi koMtshato siyakuthumela iQuote eLungisiweyo ngesicelo.
Ukuba iPropati ibhukishelwe uthotho lweminyhadala, ezi ntlawulo ziya kusebenza yonke imihla ngokusekwe kwinani leeNdwendwe ezindwendwelayo ngoSuku. Iqela lethu liya kuba ligcina i-HeadCount ngendlela efanayo neCatering.
*Singakwazi ukuQuqulela ukutya kunye nokuhonjiswa kwiminyhadala ngokusebenzisa iCatering yethu kunye namahlakani okuhombisa ngamaxabiso afikelelekayo.
Umgaqo-nkqubo we-Airbnb awusivumeli ukuba Sabelene ngeeNkcukacha zoQhagamshelwano Phambi kokuGcinwa kwencwadi eqinisekisiweyo, kungoko Nceda usebenzise uMthunywa oMiweyo ukuba unemibuzo phambi kokubhukisha.
Nceda Ungasibuzi NgeeNkcukacha zethu zoQhagamshelwano Okanye Usithumelele IiNkcukacha zakho zoQhagamshelwano Kulo Mthunywa: Okukwafanayo Kuya Kuvalwa Ngu-Airbnb. Unokwenza Ubhukisho lweNani leeNdwendwe eziHlalayo, kwaye umjelo woNxibelelwano uya kuvula.
Iintlawulo zeBonfire-Rs. I-1500 nge-Bonfire nganye (iiyure ze-3). Ukuba iFunwa ixesha elide, iRs. I-1000 iza kuhlawuliswa kwiiyure ezi-3 ezizayo. Ukuba uRhulumente weLizwe usebenzisa iBan on Bonfire (kwiinyanga zoNgcoliseko), iBonfire ayiyi kuvunyelwa.
Ukungena Kwangethuba / Ukuphuma Kade Kunokubonelelwa kuphela Ukuba asinayo Ukubhukisha ngosuku oludlulileyo (phambi kokungena) / Okanye ukuba asinakubhukisha (emva kokuphuma). UkuNgena Kwangethuba / UkuPhuma kwangexesha Iintlawulo ziya kuSebenziswa nge-Rs. 2000 ngeyure nganye.
Nceda uqaphele: Kuya kufuneka sibambe ixesha kumaxesha ethu, njengoko sifuna ixesha elaneleyo lokucoca, ukuseta ngokutsha kunye nokucoca isithuba seeNdwendwe zethu ezizayo. Undwendwe ngalunye lubalulekile Kuthi, kwaye ukulibaziseka kolunye undwendwe kuya kukhokelela kolunye amava eeNdwendwe ukuba athotyelwe. Ke siyakucela ukuba ulandele iTiming. Nceda Ungakhathaleli Izikhumbuzo Eziphindaphindiweyo Ngathi Ukuqala Imizuzu engama-45 Ngaphambi Kwexesha Lakho Lokuphuma, Njengoko Siyaqonda Kuthatha Ixesha Ukupakisha.
Ukuba neKomityi yeTea yakusasa Ukubukela iLanga liphuma phezu kwemithi emide, okanye ibhiya yasemva kwemini ihleli ngasequleni, Ukungqengqa phezu kweebhedi zethu zelanga, okanye isiselo sangokuhlwa sangokuhlwa, kunye neBarbecue ephilayo yenza ukuba ifama ibe ngamava amnandi. Iindwendwe zethu zamkelekile kakhulu ukuba zonwabele zonke iiNdawo kunye nezibonelelo zePropati.
Umbuki zindwendwe ngu- Siddhant
Isoloko Iyafumaneka ukuze Uncede kunye noNcedo lweeNdwendwe